Horudhaca Arsenal vs Tottenham – Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka adag ee North London Derby – Gool FM
Horudhaca Arsenal vs Tottenham – Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka adag ee North London Derby
Haaruun September 1, 2019
(London) 01 Sebt 2019. Kooxaha Arsenal iyo Tottenham ayaa labaduba rajaynaya inay dib uga soo laabtaan guuldarrooyinkii ugu dambeeyey ee soo gaartay, marka ay ku kulmayaan maanta oo Axad ah garoonka Emirates kulanka North London derby.
The Gunners oo qaab wacan ku bilaabtay xilli ciyaareedkan ayaa kulankeedii ugu dambeeyey waxa ay 3-1 guuldarro ah ka soo qaateen naadiga Liverpool oo ay booqdeen, halka kooxda ay dariska yihiin ee Spurs ay la dhibtoonayso guuldarro 1-0 oo ay kala kulantay Newcastle iyadoo ku dheeleysay garoonkeeda.
Taariikhda: Axad, 01 Sebt 2019
Macallinka kooxda kubadda cagta Arsenal ee Unai Emery ayaa sheegay in Mesut Ozil uu diyaar u yahay markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan, waxaana suurogal ah inuu ku soo bilowdo kulankan.
Hector Bellerin iyo Kieran Tierney ayaan dib ugu soo laaban doonin tababarka buuxa illaa bartamaha bishan September, halka kulankan uu ku soo deg degay oo uu hoosta ka soo galay soo laabasha Rob Holding.
Macallinka kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa la filayaa inuu shaxdiisa dib ugu soo celiyo Dele Alli kaddib markii uu ka soo laabtay dhaawac muruqa ah.
Yeelkeede, Kyle Walker-Peters ayaa qolka dhaawacyada kooxda Spurs kula biiray Juan Foyth, Tanguy Ndombele iyo Ryan Sessegnon.
Eric Dier ayaa dareemaya dhibaato dhanka sinta ah, iyadoo la la socon doono xaaladdiisa.
>- Arsenal ayaa guuleysatay labo ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay Premier League la ciyaareen kooxda ay xafiiltamaan ee Spurs, waxaana ay ka heysataa tobankaas kulan 2 guul, 5 barbaro iyo 3 guuldarro, labadaas guul ayaana yimid iyadoo lagu ciyaarayo garoonka Emirates labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
>- Spurs ayaa guuleystay hal kulan oo ka mid ah 26-kii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay booqatay kooxda Arsenal, waxaana ay garoonka Emirates kala soo kulantay 1 guul, 10 barbaro iyo 15 guuldarro, kulankaas ay Tottenham badisay ayaana yimid ciyaar 3-2 ku dhammaatay oo dhacay bishii November ee sanadkii 2010-kii, markaasoo ay ka soo laabteen labo gool oo ay la hormartay Gunners.
>- Shan ka mid ah 14-kii gool ee horyaalka Premier League la isaga dhaliyey kulanka dhexmara kooxaha Arsenal iyo Tottenham ayaa ahaa rigooreyaal ama gool ku laadyo, ma jiro kulan Premier League oo rigooreyaal ka badan la isaga dhaliyey waxaana ay la sinteen kulanka horyaalka ee dhexmara kooxaha Everton iyo Newcastle United kaasoo la isaga dhaliyey 18 rigoore.
>- Harry Kane ayaa dhaliyey 9 gool sagaal kulan oo horyaalka Premier League uu kaga horyimid kooxda Arsenal, kaliya Wayne Rooney 12 gool ka dhaliyey iyo Robbie Fowler 10 gool ugu shubay ayaa horyaalka Premier league goolasha ugu badan ka dhaliyey kooxda Gunners.
>- Christian Eriksen ayaa hal gool u jira inuu noqdo ciyaaryahankii shanaad ee 50 gool horyaalka Premier League u dhaliya kooxda Tottenham, si kastaba ha ahaatee weligiis gool kama dhalin 11-kii kulan ee ugu dambeeyey oo uu tartankan kaga horyimid Arsenal, mana jirto koox intaas oo kulan uu ka hortagay oo uu gool ka dhalin waayey.
Horudhaca kulanka horyaalka La Liga ee Kooxaha Villarreal vs Real Madrid… (Miyey Los Blancos ka faa’iideysan doontaa dhibcihii ay lumisay Barca?)
Maxaa ka cusub arinta Neymar Jr iyo Barcelona? (Wararkii u danbeeyay)